बुधबार, २० बैशाख, २०७४ मा प्रकाशित,
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, आइजीपी नियुक्ती प्रकरण साथै बरीयता विवादलगायतका विषयमा असन्तुष्ट रहेका निबर्तमान गृहमन्त्री निधीसँग इमेज च्यानलका जगदिश खरेलले गरेको कुराकानीको अंश:
गृहमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएको भए हुन्थ्योजस्तो लागेको छैन् ?
त्यस्तो लागेको छैन् । मलाई हल्का महसुश भइरहेको छ । यद्यपी, म जिम्मेवारीबाट भागेको भने छैन् ।
तपाईंलाई जिम्मेवारीबाट भागेको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको त छ नी ?
टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । म कहीं भागेको छैन् । यस सवालमा कुरा गर्नुपर्दा पार्टी वा सरकारका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आयो । यसबारे मलाई केही शेयर गरिएन । छलफल भएन । मलाई मिडियाका साथीहरुले फोन गरेर सोध्नुभयो । उत्तर के दिने ? त्यसपछि मैले चिनकाजी श्रेष्ठलाई सोधेपछि मात्र जानकारी पाएँ । त्यसपछि म स्तब्ध भएँ ।
आइजीपीको नियुक्तीको प्रकरणले नै महाअभियोग आएको रहेछ । यस विषय पनि गृहमन्त्रीसँग छलफल भएन् । म चुनावको सुरक्षा प्रबन्धमा खटिरहेको थिएँ । पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनावमा होमीन परिचानल गर्न लागिरहेको थिएँ । तर अचानक चुनावको मुखमा महाअभियोग प्रस्ताव आयो । त्यसपछि सबैको नजर महाअभियोगमा केन्द्रीत हुने भो । यो अलिक अशान्दर्भिक भयो । त्यसपछि मेरो मन बदलिएको हो ।
लामो समयदेखि तपाईं र सभापति शेरबहादुर देउवा सँगै हुनुहुन्छ । यसैबीचमा कसरी यस्तो अवस्था आयो ?
यसमा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ । उहाँ र म बीचमा कुनै फरक थिएन । तर आइजीपीका विषयमा हामीबीच फरक धारण आयो । म नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहान्थे । तर त्यस्तो अवस्था आएन । महाअभियोगका सवालमा पनि उहाँले मलाई सोध्नु भएन् ।
तपाईंको राजीनामा अलिक गलत समयमा भएन र ?
होइन्, म मुलुकका बारेमा चिन्तित थिएँ । संविधान संशोधन सहज हुन्छ भनेर बरीयताका सवाललाई मैले ठूलो रुपमा लिइन् । तर अवस्था झनै जटिल हुँदै आयो । राजीनामाको दाग मलाई मलाई लागेको छ । यसमा म सहमत छु ।
तपाईंले अब शेरबहादुर देउवाको साथ छोड्नुभएको हो ?
मैले छाडेको छैन । तर देउवाजीले के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँकै कुरा हो ।
बिमलेन्द्र निधि अब कांग्रेसकै रहन्छ की रहँदैन भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो नी ?
यसबारेमा प्रश्न नगरौं । कांग्रेस मेरो हो । मेरो पूर्वजहरु र मेरो पुस्ताले स्थापित गरेको हो । कांग्रेस अरु कसैको मात्र होइन् । कुनै सभापति, महामन्त्री, पदाधिकारीले कांग्रेस आफ्नो मात्र हो भन्ने सोच्छ भने गलत हुन्छ ।
तपाईंको नौं महिनाको कार्यकाल कस्तो रहयो ?
धेरै चुनौतिका बाबजुत पनि म सफल रहें । तर अन्तिम कालमा दुःखान्त रह्यो । महाअभियोगको परिस्थिति आउँदा दुःखी बनाएको छ । निर्बाचन सफल गराएर पद छाड्ने अवस्था नरहँदा दुःखी बनाएको छ । कल्पना भन्दा बाहिर गएर मेरो मन दुखेको छ ।